Wadohoose Stations xiiso Oo dhulka hoostiisa mara Art | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Wadohoose Stations xiiso Oo dhulka hoostiisa mara Art
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 30/10/2019)
Art dhulka hoostiisa mara ee saldhigyada tareenka u muuqataa in ay cusub museum dadka. Waxay noqonayaan kuwo cusub waa-arki meelaha fanka iyo design dunida. Yaa ka malaysan lahayd? Qaar ka mid ah meelaha caamka ah ugu dhiirigalin, daraysa tahay oo baaxad weyn iyo design waxaa laga heli karaa saldhigyada metro magaalooyin badan '. Waxaa intaa dheer, Art dhulka hoostiisa mara waa keeno in ka badan sayrin ah midabka si ay dhulka hoostiisa ah.
Metro Stations ayaa lagu arkayaa kororka ee xiiseeyaan iyo dalxiiska. Sidaa darteed, iyada oo sababtu tahay, waxay lagu arkayaa kororka ku dareen bulsho.
Art ee gaadiidka ayaa sidoo kale waxay keeni kartaa in hoos u dhac in siyaabo badan oo kale, sida: gaaska nooluhu sii daayo, kharribaad, iyo xiiso rakaabka! faa'iidooyinka u muuqdaan in ay noqon aan dhammaadka lahayn! Taas oo ah sababta aan ku faraxsan nahay inaan la wadaagno xulatay ugu fiican ee Art dhulka hoostiisa – saldhigyada tareenka xiiso.
Gaadiidka Tayada = Tayada Lives
Sida laga soo xigtay a daraasad ku sameeyey Machadka Horumarinta Magaalooyinka France ee. PSG qaatay celcelis 23 maalmood ee sanadka gaadiidka. Markaasaa waxaa taas ma aha marka laga reebo ah. Dadka oo dhan la isticmaalo dunida gaadiidka dadweynaha si ay u soo shaqo tagtid.
Ma ogeyd: that studies have shown that the quality of transportation directly affects the quality of the lives of transit users? The waayo-aragnimo ee safarka by gaadiidka waa in ay soo jiidashada ah oo iniinahoodu ku dhex. "Farshaxanka Public sawiri kartaa aqoonsiga meel, gargaartaan waxgarashada muhiimadda taariikhiga ah ama dhaqan xaafadda iyo dadka deggan ay. "
mashaariicda Art dhulka hoostiisa mara laga heli karaa adduunka oo dhan. Laga soo bilaabo farshaxan, mosaics, farshaxankiisa. Si ay mashaariic u weyn sida la rakibo, xaradhka, iyo reliefs. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah Siiyay Goolhaye our.
Art dhulka hoostiisa – saldhigyada tareenka xiiso: Stockholm, Sweden
Ma noqon doonto la yaab leh in qaar idinka mid ah Sweden ahaa kii ugu horeeyay on our liiska si ay u sahamiyaan dhulka hoostiisa mara Art. Haddii aad eegto caasimadda Swedish dureeri, waxaad ka heli doontaa web ah sir ah khadadka tareenada dhulka hoostiisa.
Waxaa jira in ka badan 90 oo ka mid ah 100 saldhigyada in 110km ah nidaamka tunnel. Waxaa mararka qaarkood loo yaqaan "fanka ee dunida ugu dheer gallery". Waxay lagu qurxiyey farshaxankiisa, rakiban, mosaics, iyo farshaxan by 150 fanaaniinta tan iyo 1950.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah images cajiib ah Art dhulka hoostiisa mara
Dareenka waxyoonay si ay u sahamiyaan, kuwaas oo gogo 'oo la yaab leh dhulka hoostiisa mara Art? Save A tareenka halkaas waxaad ka heli kartaa! Jartaan tikidhka tareenka ee daqiiqo ah oo aan ajuurada qarsoon!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funderground-art-subway-stations%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#ArtbyTrain #ArtinEurope #SubwayArt #UndergroundArt tahay museum subway